09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	E-mail seller	AUNG	Certified dealer	Your name
ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုဖြင့် Korea Car များကို ရောင်းချပေးနေသော ကျွန်တော်တို့ AUNG Company သည် လူကြီးမင်းတို့အား အင်ဂျင် နှင့် ဂီယာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများကို (၆)လ အာမခံဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း၊ မည်သည့် ကားအပိုပစ္စည်း(Spare Part)ကို မဆို အလွယ်တကူရရှိ နိုင်ခြင်း၊ အာမခံကာလ ကျော်လွန်သွားသော်လည်း Company Service Center တွင် ကိုရီးယား အင်ဂျင်နီယာများဖြင့် အကောင်းဆုံးစစ်ဆေး ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည် အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်း ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ထို့အပြင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ၀ယ်ယူရာတွင် ကားဝယ်ယူရုံသာမကပဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတာဝန်များကိုပါ တစ်ပါတည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော နေရာကို ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက ကျွနု်တို့ မှလွဲ၍ အခြားနေရာမရှိသည့်အတွက် ယခုပင် လှမ်းလာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ဆက်သွယ်ကြည့်ရှုလိုပါလျှင်လည်း Motors.com.mm မှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း ပြောကြားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။” Recent listings > View all listings from this seller 1/4 2016 Hyundai County
Yangon Region Save 1/4 2016 Hyundai County
Yangon Region Save 1/4 2005 Hyundai Starex
Yangon Save 1/6 2004 Hyundai Porter
Yangon Save 1/7 2006 Hyundai GRX Starex
Yangon Save 1/6 2005 Hyundai Starex
Yangon Save 1/5 2005 Hyundai Starex
Yangon Save 1/4 2005 Hyundai Starex
Yangon Save 1/6 2005 Hyundai GRX Starex
Yangon Save 1/5 2006 Hyundai GRX Starex
Yangon Save 1/6 2006 Hyundai GRX Starex
Yangon Save 1/4 2005 Kia Bongo III
Yangon Save 1/4 2005 Hyundai GRX Starex
Yangon Save 1/5 2005 Hyundai Porter II
Yangon Save 1/5 2005 Hyundai GRX Starex
Yangon Save 1/6 2006 Hyundai Porter II
Yangon Save 1/4 2005 Hyundai Porter II
Yangon Save 1/5 2005 Hyundai Starex GRX
Yangon Save 1/6 2005 Kia Bongo III
Yangon Save 1/5 2004 Hyundai Starex
Yangon Save 1/7 2005 Hyundai County
Yangon Save 1/6 2005 Hyundai County
Yangon Save 1/7 2005 Hyundai Starex
Yangon Save See all vehicles Ratings
There are no comments for AUNG! Be the first to comment!
Yangon City	View on maps
E-mail seller	View on maps